Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị nro ala ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Ouzhan
A na-ekezi ebu n’olulu bu uzo eji mezi Ebu di iche iche dika uzo ekwe. N'okpuru ọnọdụ ekwe ọkọlọtọ (akuku aka nri na-abụghị nke kwụ ọtọ), a na-ejikarị ebu ebu ọkọlọtọ maka ịgbagọ, a na-ejikwa ebu pụrụ iche maka ịgbanye ụfọdụ akụkụ nhazi pụrụ iche (dịka nkwụsị ụkwụ, ọnụ nwụrụ, wdg).
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-ehicha akụkụ --- ahaziri nkenke mpempe akwụkwọ ederede usoro
Uru nke Ouzhan mpempe akwụkwọ na-ehicha akụkụ
- Ọsọ ọsọ, nkenke dị elu na ime mgbanwe dị elu
- Igbu ihu njedebe dị mma, enweghị mkpọtụ na ịcha, na mpaghara mpaghara mpaghara na arụmọrụ dị nso na isi ihe
- Mbelata oge iwu ihe ma belata ụgwọ
Ouzhan OEM ahaziri mpempe akwụkwọ metal ekwe akụkụ nhazi ọrụ-China Shanghai mpempe akwụkwọ metal ekwe akụkụ nhazi emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị elu na-atụzi akụkụ nwere kwụsie ike ma nwee ntụkwasị obi nwere ike rụọ ọrụ. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè mmepụta nke mpempe akwụkwọ metal ekwe igwe akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị na-ehicha mpempe akwụkwọ na-agbaso kpam kpam na ụkpụrụ dị mma ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche. Anyị nwere ike ịnye ọrụ ọnụahịa asọmpi maka mpempe akwụkwọ na-ehulata ma na-ehulata ngwaahịa ndị ahịa anyị.
Ngwa ebe nke mpempe akwụkwọ na-ehulata
Mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ mpempe akwụkwọ na-ejigide ndụ anyị mgbe niile, dị ka anwụrụ ọkụ, ịgba ígwè, tankị mmanụ, ịgbà mmanụ, ọkpọkọ ikuku, ikpere, wdg, dịka obere iko iko thermos, ngaji ofe, igbe nri ehihie anaghị edozi, ịtụ ndị na-agụ Akwụkwọ, mobile ikpe ekwentị, wdg, ihe ndị a dị oké mkpa na ndụ anyị na-eji mpempe akwụkwọ, nke a na-edozi n'ime akụkụ ígwè nke nkọwa dị iche iche anyị chọrọ. O wetala ọtụtụ mgbanwe na mmepụta na ndụ anyị.
Uru nke Ouzhan mpempe akwụkwọ mpịachi ọrụ
- Ouzhan nwere ngalaba nyocha pụrụ iche pụrụ iche, tupu ebupu ya, iji hụ na ngwaahịa niile dị n'ime oke njehie.
- Nnukwu ikike mmepụta na ọnụ ahịa asọmpi.
- All nkenke mpempe akwụkwọ metal ekwe bụ n'okpuru nlezianya àgwà nnyocha.
- OEM awara awara ọrụ nwere ike hụ na ị nwetara ngwaahịa ndị achọrọ, kwado DDP, CIF, FOB na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnata ngwongwo ahụ n'enweghị nsogbu.
- Dị ka Eserese ma ọ bụ n'omume maka kpọmkwem mpempe akwụkwọ metal ekwe n'ichepụta.
- Ouzhan nwere igwe na-edozi ihe karịrị iri na abụọ, ọrụ jikọtara ọnụ, usoro mmepụta ihe, wee jiri asambodo ihe onwunwe na akụkọ nyocha ngwaahịa.
Nke gara aga: OEM igwe anaghị agba nchara esorowo akụkụ n'ibu akụkụ
Osote: Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
China emeputa CNC omenala carbon ígwè mi ...
Ahaziri igwe anaghị agba nchara esorowo akụkụ mechani ...
Ahaziri igwe anaghị agba nchara mbịne akụkụ proces ...
Ahaziri carbon ígwè-egwe ọka akụkụ processin ...